ဝမ်းစာအတွက်စက်ဘီးစီးပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဗွီဒီယိုလေးနဲ့သတိပေးစကားဆိုလာတဲ့ အေးမြတ်သူ – Cele Top Stars
၀မ်းစာအတွက်စက်ဘီးစီးပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဗွီဒီယိုလေးနဲ့သတိပေးစကားဆိုလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
မင်္ဂလာပါချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး ကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်အများ ဆုံး ဖြစ်တဲ့ Delivery ပို့တဲ့သူတွေအတွက် သတိပေးစကားဆိုလာခဲ့ပါတယ် ။ အနှေးယာဉ်မောင်းပြီး စက်ဘီးနဲ့ ဝမ်းစားရှာနေတဲ့ သူတွေအတွက် ရောင်ပြန်လေးတွေကို တပ်ကြဖို့အတွက် ဦးစားပေးပြီး ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ။
နေ့ခင်းဘက်သွားတဲ့နေရာမှာတော့ ကားတွေက မြင်ရပေမယ့် ညဘက်ရောက်ရင်တော့ ကားမောင်းတဲ့သူတွေက လမ်းမပေါ်က စက်ဘီးတွေကို မမြင်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် back ကြည့်မှန် သို့မဟုတ် ရောင်ပြန်လေးတွေကို တပ်စေချင်တဲ့ အကြောင်း နဲ့ အသက်က အရေးကြီးတဲ့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ မများတဲ့ဟာလေးကို လိုက်လုပ်စေချင်တယ်လို့ စေတနာရှေ့ထားပြီး သတိပေးစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဝမ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်နေရတာကို နားလည်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရယ်ကိုလည်း ကာကွယ်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစကားဆိုထားပါသေးတယ်.. ။
စက်ဘီးစီးပြီး ဝမ်းစာရှာတဲသူကိုလည်းစိတ်ပူတယ် ၊ အိမ်မှာနေရင်း မုန့်မှာစားတဲ့သူတွေ ကိုလည်းစိတ်ပူတယ် ၊ အားလုံးအားလုံးကိုစိတ် ပူတယ်ရှင့် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမ ရဲ့ စေတနာ စကားတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမျှဝေပေးထားပါသေးတယ် ။ မမြတ်လေးကိုချစ်တဲ့ ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးလည်း အသိပညာရစေဖို့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို တဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့
မင်ျဂလာပါခဈြပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျ အေးမွတျသူကတော့ ပရိသတျတှအေတှကျ မိသားစုဝငျတဈယောကျလို သဘောထားပွီး ကိုဗဈကာလမှာ အလုပျအမြား ဆုံး ဖွဈတဲ့ Delivery ပို့တဲ့သူတှအေတှကျ သတိပေးစကားဆိုလာခဲ့ပါတယျ ။ အနှေးယာဉျမောငျးပွီး စကျဘီးနဲ့ ဝမျးစားရှာနတေဲ့ သူတှအေတှကျ ရောငျပွနျလေးတှကေို တပျကွဖို့အတှကျ ဦးစားပေးပွီး ပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ. ။
နခေ့ငျးဘကျသှားတဲ့နရောမှာတော့ ကားတှကေ မွငျရပမေယျ့ ညဘကျရောကျရငျတော့ ကားမောငျးတဲ့သူတှကေ လမျးမပျေါက စကျဘီးတှကေို မမွငျရတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့ လုံခွုံမှုအတှကျ back ကွညျ့မှနျ သို့မဟုတျ ရောငျပွနျလေးတှကေို တပျစခေငျြတဲ့ အကွောငျး နဲ့ အသကျက အရေးကွီးတဲ့အတှကျ ငှကေုနျကွေးကြ မမြားတဲ့ဟာလေးကို လိုကျလုပျစခေငျြတယျလို့ စတေနာရှထေ့ားပွီး သတိပေးစကားဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ဝမျးစာအတှကျ အလုပျလုပျနရေတာကို နားလညျပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့အသကျအန်တရယျကိုလညျး ကာကှယျကွဖို့အတှကျတိုကျတှနျးစကားဆိုထားပါသေးတယျ.. ။
စကျဘီးစီးပွီး ဝမျးစာရှာတဲသူကိုလညျးစိတျပူတယျ ၊ အိမျမှာနရေငျး မုနျ့မှာစားတဲ့သူတှေ ကိုလညျးစိတျပူတယျ ၊ အားလုံးအားလုံးကိုစိတျ ပူတယျရှငျ့ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမ ရဲ့ စတေနာ စကားတှကေို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာ ကနတေဆငျ့ ပရိသတျတှကေို အသိပေးမြှဝပေေးထားပါသေးတယျ ။ မမွတျလေးကိုခဈြတဲ့ ဆယျလီကမ်ဘာ ပရိသတျကွီးလညျး အသိပညာရစဖေို့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို တဆငျ့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ စာဖတျပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နေ့
မနာလိုသူတွေရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ မေမီကိုကိုရဲ့ ဘက်ကနေ အပြည့်အ၀ရပ်တည်ပေးပြီး သူမအကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လပြည့်